My Hobby! | The World of Pinkgold
Yadana Khit Kyaw on June 21, 2009 at 8:30 am said:
I like your work best..that is more than amazing …”
Have A Good life…!
MrDBA on June 21, 2009 at 9:07 am said:
GTC ဘဲ နိမ့်တယ်ထင်ရတယ်လို့ .. မှားပါတယ်။ (စိတ်ဆိုးစွာပြောသွားသည်။)
cuttiepinkgold on June 21, 2009 at 2:35 pm said:
မသက်ဇင် on June 23, 2009 at 2:37 pm said:
မီးလေးဇာ on June 24, 2009 at 6:47 am said:
ခုမှရောက်တယ်ကွာ ဆောရီး နင်နဲ့က၀ါသနာလာတူနေတယ်
ရေးတာနောက်ကျလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ငါသိနေတာပဲ နင်မအာဘူးဆိုတာ
အိမ် on June 28, 2009 at 8:02 pm said:
ဝါသနာတွေ တယ်များပါလားဗျို့ သူများတွေက တခုထဲ သူကများမှများ
nhn on July 13, 2009 at 9:06 am said:
ကိုယ်တွေ့ချွေးတပ်မှတ်တမ်းက ဆရာလင်းယုန်သစ်လွင်ပါခင်ဗျာ။ ဆရာလင်းယုန်မောင်မောင်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါလေးပြင်ပေးပါ
cuttiepinkgold on July 13, 2009 at 9:13 am said:
ဟုတ် ကျေးဇူးပါ အကို.. လင်ယုန်တွေရှုပ်သွားတာ ထင်တယ်